ရိုက်ကုန်ကြပြီ..။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Hobbies & Games » ရိုက်ကုန်ကြပြီ..။
Posted by kai on Aug 2, 2010 in Hobbies & Games, News, U.S. News |0comments
Badminton Tournament SocalBA
အောက်ကသတင်းလေးရလို့တင်လိုက်တာပါ။ ခေါင်းစဉ်ကို လူစိတ်ဝင်စားအောင်ရေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့။
ရိုက်တာကတော့ ရိုက်တာပါပဲ။ မနေ့က ပင်ပေါင်ရိုက်ပွဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ရိုက်ပုံ..အဲ..ဓါတ်ပုံတွေကို အောက်က လင့်ခ်လိပ်စာကို..ကီးဘုတ်ကခလုပ်တွေရိုက်ပြီး သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မနေ့(တနင်္ဂနွေ)နေ့က ရိုက်ကြအပြီး ဆုပေးပွဲလုပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပျော်ပျော်ပါးပါး မုန့်ဟင်းခါးစားကြပါတယ်။
အခမဲ့လုပ်အားပေး မုန့်ဟင်းခါး မဟုတ်ပါဘူး. တကယ်မုန့်ဟင်းခါးစားကြတာပါ။
ပြီးတော့ နောက်ထပ်ရိုက်ပွဲလည်းရှိပါသေးတယ်။ သြဂုတ်လ ၁၅ရက်နေ့မှာပါတဲ့.။ဘက်တမင်တန်ရိုက်ကြမှာပါ။….ပေါ့ပေါ့ပါးပါး..ပြောရရင်ကြက်တောင်ပေါ့နော..။
ဖလိုင်ယာမှာ (မယုံရင်) ကြည့်ပါ။ အောက်ဆုံးက ဖုံးနံပါတ်တွေကိုဆက်ပြီး ပါဝင်ရိုက်နိုင်ကြဖို့ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ကြပါကြောင်း..။
We are glad to inform you that SCBA hadasuccessful turn out for this years Table Tennis Tournament. In this email we included some links to the photos taken during this event for everyone to enjoy. SCBA would like to say THANK YOU to all our Organizers and participants for this Tournament.
We will also have open registrations for the next coming tournament which will be the SCBA BADMINTON TOURNAMENT. For those who are interested we have attachedaflyer to this tournament. Feel free to open to view.
Contact Persons for Badminton Tournament
Patric Lim 626-482-7400
Harry Lau 626-622-1923
Dr. Soe Hlaing 626-497-1724
Dr. Zaw Min Thu 714-281-1383
Ko Chit Khin 626-548-9905
Ko Ye Myint 626-755-3929
Dr. Phillip Zaw Htun Kaw 626-625-3666
Or email to scba.sports@gmail.com
Organization Sub Committee